Iindaba -Ukuba ubude ekugxilwe kubo buchaphazela njani iziphumo zemodeli ye-3D
Ubude obugxile ekuchaphazeleni iziphumo ze-3D
Ukufota nge-oblique, kukho iindawo ezine ekunzima kakhulu kuzo ukwakha iimodeli ze-3D:
Indawo ebonakalayo ebonakalayo engenakubonakalisa ulwazi lokwenyani lwento, umzekelo, umphezulu wamanzi, iglasi, indawo enkulu yokwakhiwa komhlaba.
Izinto ezihamba kancinci. Umzekelo, iimoto ekudibaneni kweendlela
Imiboniso apho amanqaku-amanqaku engenakulinganiswa okanye amanqaku amanqaku afanayo aneempazamo ezinkulu, ezinjengemithi kunye namatyholo.
Izakhiwo ezinzima ezingenanto. Ezinjengee-guardrails, izitishi ezisisiseko, iinqaba, iingcingo, njl.
Uhlobo lwe-1 kunye no-2, nokuba ungawuphucula njani umgangatho wedatha yoqobo, imodeli ye3D ayizukuphucuka.
Uhlobo lwe-3 kwaye uthayiphe izigcawu ezi-4, kwimisebenzi yokwenyani, ungaphucula umgangatho wemodeli ye-3D ngokuphucula isisombululo, kodwa kusese lula kakhulu ukuba nezinto ezingenanto kunye nemingxunya kwimodeli, kwaye ukusebenza kwayo kuya kuba sezantsi kakhulu.
Ukongeza kwezi ndawo zingentla, kwinkqubo yokumodela eyi-3D, eyona nto sihlawula ngakumbi ngumgangatho we-3D wezakhiwo. Ngenxa yeengxaki ezinxulumene nokuseta iiparameter zokubhabha, iimeko zokukhanya, izixhobo zokufumana idatha, isoftware ye-3D, njl.njl, kulula kwakhona ukwenza ukuba isakhiwo sibonise: ukubetha, ukuzoba, ukunyibilika, ukususwa, ukususwa, ukubambelela, njl. .
Ewe, iingxaki ezichazwe apha ngasentla zinokuphuculwa ngemodeli ye-3D. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwenza umsebenzi omkhulu wokuguqula imodeli, indleko zemali kunye nexesha ziya kuba nkulu kakhulu.
Imodeli ye-3D ngaphambi kokulungiswa
Imodeli ye-3D emva kokulungiswa
Njengomvelisi weR & D weekhamera ze-oblique, uRainpoo ucinga ngokwembono yokuqokelelwa kwedatha:
Uyila njani ikhamera ye-oblique ukuze uphucule ngempumelelo umgangatho wemodeli ye-3D ngaphandle kokunyusa ukungahambelani kwendlela yokubhabha okanye inani leefoto?
2, Buyintoni ubude obugxile
Ubude obugxile belensi yiparameter ebaluleke kakhulu, emisela ubungakanani besihloko kumfanekiso wokucinga, olingana nesikali sento kunye nomfanekiso. Xa usebenzisa ikhamera emileyo yedijithali (DSC), inzwa ikakhulu yi-CCD kunye ne-CMOS. Xa kusetyenziswa i-DSC kuphando lwasemoyeni, ubude obugxile ekumiseleni umgama wesampulu yomhlaba (GSD).
Xa udubula into ekujoliswe kuyo kumgama ofanayo, sebenzisa ilensi enobude obude obude, umfanekiso wale nto mkhulu, kwaye iilensi ezinobude obufutshane obugqithisileyo zincinci.
Ubude bokujolisa bunquma ubungakanani bento emfanekisweni, i-engile yokubukela, ubunzulu bentsimi kunye nembono yomfanekiso. Kuxhomekeke kwisicelo, ubude bembonakalo bunokwahluka kakhulu, ukusuka kwi-mm ezimbalwa ukuya kwiimitha ezimbalwa. Ngokubanzi, ukufota kwasemoyeni, sikhetha, sikhetha ubude obugxile kuluhlu lwama-20mm ~ 100mm.
Kwilensi yokubonakalayo, i-engile eyenziwe yindawo esembindini yelensi njengeyona ndawo iphambili kunye noluhlu oluphezulu lomfanekiso wento enokudlula kulensi ibizwa ngokuba yimbono yokujonga. Inkulu i-FOV, encinci ukukhulisa ukukhanya. Ngokwemigaqo, ukuba into ekujoliswe kuyo ayikho ngaphakathi kwe-FOV ukukhanya okubonisiweyo okanye okukhutshwe yinto akuyi kungena kwilensi kwaye umfanekiso awuyi kwenziwa.
4, ubude beFocal kunye neFOV
Ubude obugxile kwikhamera ye-oblique, kukho ukungaboni ngasonye okuqhelekileyo:
I-1) Ixesha elide ekugxilwe kulo, kokuphakama kwendiza yeedrones, kunye nendawo enkulu onokuwugubungela umfanekiso;
2) Okukhona ubude bembonakalo bude, kokukhona indawo inkulu yokugubungela kunye nokusebenza kokusebenza okuphezulu;
Isizathu soku kungavisisani ngentla apha kukuba unxibelelwano phakathi kobude obugxile kwi-FOV alwamkelwa. Unxibelelwano phakathi kwezi zimbini zezi: ubude obude ekugxilwe kubo, i-FOV incinci; mfutshane ubude ekugxilwe kubo, kokukhona i-FOV inkulu.
Ke ngoko, xa ubungakanani bomzimba wesakhelo, isisombululo sesakhelo, kunye nokusonjululwa kwedatha ngokufanayo, utshintsho kubude obugxile luya kutshintsha kuphela ukuphakama kwendiza, kwaye indawo egqunywe ngumfanekiso ayitshintshanga.
5, ubude beFocal kunye nokuSebenza ngokuSebenza
Emva kokuqonda unxibelelwano phakathi kobude obugxile kwi-FOV, usenokucinga ukuba ubude be-focal ubude abunampembelelo ekusebenzeni kakuhle kwendiza. Kwi-Ortho-photogrammetry, ichanekile ngokuchanekileyo (ngokungqongqo, ubude bexesha ekugxilwe kulo, ngaphezulu ukuphakama kwendiza, kokukhona isebenzisa amandla, lifutshane ixesha lokubaleka kwaye isezantsi ukusebenza ngokukuko).
Ukufotwa kwe-oblique, kokukhona ubude bembonakalo, ukuthoba ukusebenza kukusebenza.
Iilensi ze-oblique zekhamera zihlala zibekwe kwi-angle ye-45 °, ukuze kuqinisekiswe ukuba idatha yomfanekiso we-facade yomda wendawo ekujoliswe kuyo iyaqokelelwa, indlela yeenqwelomoya kufuneka yandiswe.
Ngenxa yokuba iilensi zinyanzelwe kwi-45 °, kuya kwenziwa i-isosceles ekunxantathu ekunene. Ukuthatha ukuba imeko ye-drone yenqwelomoya ayithathelwa ngqalelo, eyona nto iphambili ye-axis yeelensi ithathwa nje ukuya kuthi ga kumda wokulinganisa njengemfuneko yokucwangciswa kwendlela, emva koko indlela yedrone yandisa umgama olinganayo nobude bendiza yedrone .
Ke ukuba indawo yokugubungela indlela ayitshintshi, eyona ndawo isebenzayo yelensi emfutshane yokujonga ikhulu kunalensi ende.
Edlulileyo:Amanqaku olawulo kunye nedatha ye-PPK zichaphazela njani ukuchaneka kwesihlobo semodeli ye-3D
Okulandelayo:Iindlela ze-GSD kunye nezo zithwala zichaphazela njani ukuchaneka kwemodeli ye-3D